Foko Archives — Trip LEE - OFISIALY SITE
Foko Foko Foko Foko Foko Foko Foko Foko Foko Foko Foko Foko Foko Foko
Additional Vocals amin'ny: J. Paul
sary avy: Alex Medina
Samy hafa ary nahay ny: Jacob “Biz” Morris
Aza tsy misy olona te-hihaino ny fanaintainana
Izany no fomba nahatsapa aho rehefa flipping aho amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ireo amin'ny twitter, rehetra tsapako dia orana
Izy ireo milaza ahy handresy izany antitra
Izany zavatra tsy misy intsony
Fa izay tsy dikany lehibe rehefa mijery ireo eny an-dalambe
Noho izany, tena rehefa mahatsapa toy izany coulda nisy ahy
Ny olona dia afaka milaza aminareo aho ny fomba mahatsiaro aho amin'izao fotoana izao
Ah dia te-mahalala mahatsiaro aho amin'izao fotoana izao
Tsapako tahaka izany coulda nisy ahy
Isika rehetra natao araka ny endrik'Andriamanitra fantatrao
Ny fiainantsika rehetra-danja, ny fahitana dia Nopotehina
Mahatsapa alahelo antony isika teto anatrehan'i
Iza no manan-tsiny aho, tsy fantatro
Fa coulda nisy ahy
Ary izaho tsy nahalala Mike Brown
I tsy fantatro Trayvon
Ary izaho tsy nahalala Sean Bell
Fa Izaho no mahalala izy ireo lasa
I tsy fantatro Oscar Grant na Tamir Rice
Ary izaho tsy nahalala Eric Garner
Fa Izaho no mahalala izy ireo ny fiainana
Moa sarobidy noho izy ireo nanao hoe: ny fahitalavitra efijery
Halako Nahazo lisitra lava, finna mahita ahy ianao niantsoantso mafy
Cause tsapako toy ny tsy mahita isika mpanjaka
Natao mba hitondra tahaka Azy,…
Ny foko mavesatra. Fantatro fa Andriamanitra dia tsara, ary Izy no amin'ny fanaraha-maso, fa ny fo mavesatra.
Tamin'ny herinandro lasa taorian'ny zava-nitranga tao Ferguson (ary ny valinteny ho azy tao amin'ny haino aman-jery sosialy), Nahatsapa ny mavesatra mba hanoratra hira. Ny tanjona dia tsy hanaovana izay fanambarana lehibe na fanambarana, fa ny hanehoana ny fomba nahatonga ahy hahatsapa ny zava-drehetra. Noho izany dia nanomboka nanoratra, ary izao no nivoaka. Ny fihetseham-po izay nanako tao an-tsaiko dia: "Mety efa nisy aho."
Nanana lahatsoratra iray manontolo ny Kristianina vonona ny fomba tokony mamaly amin'ny fotoana toy izany, fa araka ny vaovao momba an'i Eric Garner omaly, Nanapa-kevitra ny hiandry sy lahatsoratra izay taty aoriana. Amin'izao fotoana izao, Fotsiny aho te-hilaza fa manana ny malahelo am-po. Tsy liana aho amin'ny adihevitra na hevitra dieny izao. Fotsiny aho te haneho ny fahalalahana hanisy ratsy ahy.
Hanisy ratsy aho satria Eric Garner lahatsary dia nampivaloharika mijery. Rehefa mivady voalohany nijery azy io volana lasa izay, isika samy nitomany. Ny fiainana dia fanomezana tsara tarehy, ary izany mampieritreritra ny mijery fa ny fiainana hiala ny vatana olona - indrindra fa raha ny nalain'ireo lehilahy hafa. noheveriko, "Azo antoka fa ny olona dia tsy afaka afa-maina amin'ny…
Fantatro fa maro no manontany tena hoe nahoana io fitsarana manokana no voasambotra ny sain'ny maro. Ny hafa manontany tena hoe fa maninona ny sasany dia toy izany ry namana mainty haingana ny miara-mitondra Trayvon Martin, na dia teo aza ny zava-misy fa nanana olana araka ny sitrapony ihany. Sady koa anie,…